VaTsvangirai naVaMugabe Vopesana paNyaya yeMinda
Kurume 26, 2009
Apo vana veZimbabwe vave kutarisira kuona shanduko kubva pakaumbwa hurumende yemubatanidzwa, zvimwe zvezvinhu zvinotarisirwa kunge zvagadziriswa, zvichiri kuenderera mberi zvichinetsa.
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vari kutarisirwa kusangana nemakurukota emapazi akaita seemukati menyika, pamwe nerekurima, kuitira kuti vakurukure nezvedambudziko remhirizhonga iri kuitika mumapurazi ari kuramba achitorwa. VaTsvangirai vanonzi vari kuda kuti kutorwa kwemapurazi kumiswe zvachose, kuitira kuti Zimbabwe ionekwe senyika inoremekedza mitemo nekodzero dzevanhu.
Asi nekune rimwe divi, mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vari kuti hapana mapurazi ari kutorwa patsva, asi kuti varimi vechichena vari pamapurazi aya, ndivo vari kuramba kubva, sezvo akatorwa nehurumende kuti agariswe vanhu patsva.
Vamwe vanoti dambudziko iri richatadzisa nyika kuwana rubatsiro rwekuti hurumende iyi ikwanise kufambira. Vamwewo ndivo vari kuti izvi zvinogona kuputsa hurumende yemubatanidzwa, sezvo paine kusawirirana pakati pevatungamiri vaviri ava, VaMugabe naVaTsvangirai.
Jonga Kandemiiri weStudio7 aita hurukuro naenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaFarai Maguwu, avo vanoshanda nesangano reCentre for Research and Development, pamwe naVa Farai Mamina.
Hurukuro naVaFarai Maguwu pamwe naVaFarai Mamina